Global Voices teny Malagasy » Nesorin’ny Google tao amin’ny Play Store ny lalao miantsehatra amin’ny fihetsiketsehana tao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2019 5:40 GMT 1	 · Mpanoratra The Stand News Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, GV Mpisolovava
Navoaka tao amin'ny The Stand News  tamin'ny 10 Oktobra 2019 ny dikan-dahatsoratra amin'ny teny Shinoa. Navoaka eto amin'ny Global Voices izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny dikanteny Anglisy .
Naato tao amin'ny Google Play ny hatra miantsehatra amin'ny finday miaraka amin'ny fitantarana mifototra amin'ny fihetsiketsehana ao Hong Kong vao haingana  noho ny fanitsakitsahana ny «politika'ny hetsika saropady» ao amin'ilay sehatra. Andro vitsy lasa izay, nofoanan'ny Apple store ihany koa ny app (hatra) finday izay nanome toromarika mivantana ny toerana nisy ny fihetsiketsehana sy ny misy ireo polisy  .
Tao anatin'ny antsafa an-telefonina niarahana tamin'ny The Stand News, nilaza ilay mpamolavola ny lalao nandray solonanarana hoe “Spinner of Yarns” fa nahazo mailaka fampandrenesana avy amin'ny Google izy nilaza fa nanitsakitsaka ny “politikan'ny hetsika saropady” an'ilay orinasa ny lalao finday ary voatery naato. Araka ny fitsipika, ny hetsika saropady dia ilazana ny “votoaty izay heverina ho toy ny manararaotra na tsy mahay mandanjalanja ny maha saropady ny loza voajanahary, ny fifandirana, ny fahafatesana, na ny voina hafa.” Mandrara ny mpamolavola tsy hahazo vola  noho ny “fifandirana na voina goavana ao anatin'ny fitrangàny” amin'ny alàlan'ny lalao video” ihany koa ny fitsipika.
Nanazava  izy tao amin'ny lahatsoratra fanokafana tao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra LIHKG mitovy amin'ny Reddit fa ny hisarika ny saina iraisampirenena momba ny toe-draharahan'ny hetsika any Hong Kong no tena tanjony.
Betsaka ny orinasa vahiny no voampanga nilefitra tamin'ny faneren'ny governemanta Shinoa amin'ny fanivanana ny fihetsiketsehana any Hong Kong. Vao haingana ny orinasa Amerikana mpamokatra lalao Blizzard no nandrara ilay mpilalao e-sport iray tao Hong Kong  [mg] tsy hifaninana tamin'ny lalao Hearthstone taorian'ny hiaka nataony momba ny teny filamatra manohana ny demaokrasia nandritra ny antsafa taorian'ny lalao.
Notsoahan'ny Apple tao amin'ny store-ny ny hatra (app) HKmap.live, izay mampahafantatra ireo mpisera ny toerana misy ny fihetsiketsehana sy ny fidinan'ny polisy taoriana kelin'ny niampangan'ny People’s Daily mpiara-dia amin'ny Antoko Komonista Shinoa ny orinasa ho nanampy ireo “mpirotaka” ao Hong Kong. Raha afaka nanampy ny mpisera hisoroka amin'ny fidirana amin'ny faritra misy fifandirana mahery vaika ilay hatra (app) dia nilaza ny Apple tamin'ny The New York Times  hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/18/143928/
 fihetsiketsehana ao Hong Kong vao haingana: https://globalvoices.org/specialcoverage/the-people-of-hong-kong-vs-the-china-extradition-bill
 toromarika mivantana ny toerana nisy ny fihetsiketsehana sy ny misy ireo polisy: https://www.nytimes.com/2019/10/09/technology/apple-hong-kong-app.html
 Mandrara ny mpamolavola tsy hahazo vola: https://www.thewrap.com/google-sensitive-hong-kong-protestor-game/
 nandrara ilay mpilalao e-sport iray tao Hong Kong: https://mg.globalvoices.org/2019/10/17/143841/